Toerana fialan-tsasatra 5 lehibe ho an'ny 2018
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Costa Rica » Toerana fialan-tsasatra 5 lehibe ho an'ny 2018
Raha iray amin'ireo ianao 11% ny Amerikanina mandany famerenam-bola amin'ny taona 2018 amin'ny fialan-tsasatra ary mila aingam-panahy ho an'ny traikefa nahafinaritra manaraka anao, dia angamba te-handinika ny toerana sasany voalaza etsy ambany ianao. Tsy mbola aloha loatra ny mandamina ny fialan-tsasatra sahaza anao manaraka, na izany fitadiavana fientanam-po any Costa Rica na fanodinkodinana mamaky ny arabe manan-tantara any Portugal, atombohy ny taona vaovao amin'ny alàlan'ny drafitra ny dianao manaraka hahita toerana mahafinaritra sasany sy hanana traikefa mahatalanjona.
Tsy i Mexico ihany no manana manintona mahatalanjona, torapasika tsara tarehy, vohitra Maya ary canyons any an'efitra mahatalanjona, fa mora ihany koa ny mandeha amin'ny teti-bola arakaraka ny sandam-bola ankehitriny. Raha tsy zava-dehibe aminao ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina na ny zava-mahaliana ala dia mankany amin'ny toerana mafana any Merida, Mexico City na Oaxaca ho an'ny kolontsaina, ny tantara ary ny sasany amin'ny sakafo mahandro azy ireo.
Manomboka amin'ny fialantsasatry ny fianakaviana any ambanivohitra ka hatrany amin'ny fiatoana tanàna any London, mankafy fialan-tsasatra nefa tsy ketraka mora atao any Angletera. Na misafidy an'i Cornwall any andrefana na ny Distrikan'ny farihy any avaratra ianao, ny hatsarany any ambanivohitra dia azo antoka fa hamela fahatsapana mahafinaritra anao. Raha ny tanàna no jerena, tsy i Londres ihany no mahasarika mpizahatany: i Bristol, Leeds na i Manchester dia eo amin'ny sarintany avokoa ary toerana velona hitsidihana azy ireo koa.
Ity repoblika kely ity dia mety ho iray amin'ireo faritra maro karazana bio eto amin'ny planetantsika miaraka amin'ny hatsaran-tarehy voajanahary toy izany izay manomboka amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny ala orana, honko honko ka hatramin'ny volkano. Toerana fitsangatsanganana ara-tontolo iainana voalohany ianao dia hanana fahalalahana mandeha an-tongotra mamakivaky ala ala na manidina amin'ny lalan-drano ao amin'ny Tortuguero National Park ary manakaiky ny fiainana dia.
Mipetraka eo an-tampon'ny toerana mafana eo amin'ny volkano i Islandy, dia voaporofo fa toerana malaza omena azy io fahitana mahavariana an'ny Jiro Avaratra izay tena hita amin'ny volana feb. Rehefa eo ianao dia tsidiho ilay Lagoon Blue malaza, riandrano Seljalandsfoss, volkano Eyjafjallajökull ary ilay fasika mainty amoron-dranomasina Vik. Rehefa nandinika ny glacier mahagaga izy ireo ary nilentika tao amin'ny iray amin'ireo loharano mafana marobe, tadiavo ny renivohiny cosmopolitan, Reykjavík.
Mety ho firenena kely ity, matetika tsy raharahian'ny Espana na Italia, fa ny fizahan-tany any Portugal amin'izao fotoana izao dia mirongatra ary tsy misy fiafarany miadana. Ankoatra ny renivohitra misy kolontsaina marobe, Lisbonona, tanàna faharoa avaratra sy ho avy, dia mahazo laza malaza ihany koa i Porto. Atsipazo amoron-dranomasina mahafinaritra any Algarve, trano mimanda medaly sy tranokala UNESCO an'ny Heritage Tomar na Batalha, ary misy traikefa nahafinaritra miandry anao.
Manatsara ny hetsika India ny fizahantany Japon
Tantaran'ny hotely: Ny Ramatoa Voalohany ao Waikiki